काठमाडौंमा ‘मिनी क्यासिनो’ फस्टाउँदै - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौंमा ‘मिनी क्यासिनो’ फस्टाउँदै
मंसिर ३ । काठमाडौं, पाँचतारे होटेलका अधिकांश क्यासिनो बन्द भएपछि राजधानीमा ‘मिनी क्यासिनो’हरू फस्टाएका छन् । घर तथा फ्ल्याट भाडामा लिएर गोप्य रूपमा क्यासिनोकै शैलीमा जुवा खेलाउन थालिएको छ,नया पत्रिका दैनिक लेख्छ।
क्यासिनोमा जस्तै पेसेवर रूपमा नै जुवा खेलाइँदै आएको गौशालाको एक घरमा प्रहरीले मंगलबार बेलुका छापा मारी १७ जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूबाट १९ लाख ९४ हजार नगदसमेत प्रहरीेले बरामद गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले गौशालास्थित केशरध्वज राणाको घरमा छापा मारी रंगेहात जुवाडेहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
राणाले लामो समयदेखि आफ्नो घरमा जुवा खेलाउँदै आएका थिए । घरधनी तथा जुवा सञ्चालक राणासहित १७ जनालाई परिसरको टोलीले कौडा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो । राणाको साथबाट प्रहरीले एक लाख ९२ हजार रुपैयाँ बरामद गरेको छ ।
त्यस्तै, नुवाकोटका बद्री धितालबाट दुई लाख पाँच सय, स्वयम्भूका मुक्ति लामाबाट दुई लाख ३८ हजार, बौद्धका कृष्ण लामासँग चार लाख बरामद भएको छ । त्यस्तै, नुवाकोटका जितबहादुर नेवारबाट एक लाख २३ हजार र बानेश्वरका प्रकाश पन्तबाट ९३ हजार रुपैयाँ बरामद भएको छ । खालबाट पक्राउ पर्ने अन्यमा अभिषेक राणा, रूपेश श्रेष्ठ, क्षेत्रबहादुर तामाङ, जोगबहादुर तामाङ, सोहेल कार्की, विजय थापा, आनन्द दाहाल, उमेश थापा, निश्चल प्रधान, हरि घिमिरे र प्रदीप क्षेत्री छन् । प्रहरीले कौडा र तास बरामद गरेको छ ।
‘राणाले पेसेवर रूपमा नै जुवा खेलाउने गरेको सूचनाका आधारमा हामीले छापा हानेका हौँ,’ काठमाडौं परिसरका प्रमुख एसएसपी विक्रमसिंह थापाले भने, ‘क्यासिनोकै शैलीमा त्यहाँ हारजित हुने गरेको देखिन्छ ।’
राजधानीमा यसरी जुवा खेलाइने दर्जनौँ अखडा रहेको स्रोत बताउँछ । गत २७ असोजमा ललितपुर प्रहरीले झम्सिखेलको एक रेस्टुरेन्टबाट १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले झम्सिखेलको मिरर लन्जमा क्यासिनोकै शैलीमा तास खेलिरहेको अवस्थामा ४ लाख ३६ हजार नगदसहित पक्राउ गरेको थियो ।
हाल सोल्टी होटेलमा क्यासिनो माजोङ र सांग्रिला होटलमा क्यासिनो सांग्रिला मात्र सञ्चालनमा छन् । सरकारले क्यासिनोका लागि कडा प्रावधानसहितको नियमावली लागू गरेपछि अरू क्यासिनो बन्द भएका हुन् । पाँचतारे होटेलका क्यासिनो बन्द भएपछि मिनी क्यासिनो शैलीका जुवा अखडाहरू बढेका हुन् ।
केही वर्ष पहिले पाँचतारे होटेलका क्यासिनोमा नै पुगेर नेपाली जुवा खेल्थे । तर, हाल राजधानीमा दुईवटा मात्र क्यासिनो छन् । त्यसमा पनि नेपालीलाई प्रवेशमा निकै कडाइ छ । सोही कारण राजधानीमा क्यासिनोकै शैलीमा गोप्य गरी जुवा खेलाउने गरिएको हो ।
कहाँ छन् अवैध अखडा ?
एकान्तस्थलका घर, रेस्टुरेन्ट तथा गेस्टहाउसहरूमा यसरी बाह्रै महिना जुवा खेलाइने गरेको छ । धेरै अखडामा तास नै खेलाइने गरिन्छ । बौद्धका कतिपय ठाउँमा भने गोटीमार्फत खेलिने तिब्बतीय जुवा खेलाइन्छ । उपत्यकामा धेरै स्थानमा मिनी क्यासिनो शैलीमा जुवा खेलाइने सूचना आएको र आफूहरूले निगरानी सुरु गरिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विक्रमसिंह थापा बताउँछन् ।
को–को जान्छन् ?
यस्तो जुवा अखडामा प्रहरी, सैनिक अधिकारी तथा निजामती कर्मचारीहरू जाने गर्दछन् । प्रहरी नै जाने भएकाले कतिपय स्थानमा स्थानीय प्रहरीकै संरक्षण हुने गरेको स्रोत बताउँछ । जुवा खेल्न व्यापारीहरूसमेत जाने गरेका छन् ।